राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुका निर्देशक डा. हरीशचन्द्र उप्रेतीमाथि कर्मचारीद्वारा आक्रमण – Health Post Nepal
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुका निर्देशक डा. हरीशचन्द्र उप्रेतीमाथि कर्मचारीद्वारा आक्रमण
२०७५ असोज ४ गते १८:०६
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा.हरीशचन्द्र उप्रेतीमाथि प्रयोगशालाकै कर्मचारीले हातपात तथा दुर्व्यवहार गरेका छन् ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारममा आफूले भनेअनुसार नम्बर राख्नुपर्ने भन्दै केही दिनदेखि दबाब दिँदै आएका कर्मचारीले आज दिउँसो ३ बजे कार्यकक्षमा छिरेर दुव्र्यव्यवहार गरेको डा.उप्रेतीले हेल्थपोसटसँग बताए ।
कर्मचारीहरुले कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारममा आफै नम्बर भरेर ल्याएर त्यसमा सही गर्न हाकिमलाई दबाब दिएका थिए । ‘मैले पनि नम्बर हाल्ने ठाउँ पाउनुपर्छ, जे ल्यायो त्यसैमा सही गर्दिन भनेको थिएँ,’ डा.उप्रेतीले भने, ‘आज पनि दबाब दिए, मैले मानिन ।’
विहीबार पनि जवरजस्ती सही गराउन खोजेको तर नमानेपछि आक्रमण गरेको उप्रेतीको भनाई छ । उनलाई कार्यकक्षबाट कपडामा तान्दै बाहिर निकालेका थिए ।
डा.उप्रेतीका अनुसार विभागका नासु माधव घिमिरेले उनलाई कार्यकक्षबाट तानेक मुक्का प्रहार गरेका थिए । तर उप्रेती छलेर बचेका थिए ।
सुरुमा समूहमा आएका कर्मचारीले ढोका थुनेर राखेका थिए । थुनिएपछि उनले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । प्रहरी आउनुअगावै फेरि अचानक ढोका खोलेर भित्र छिरेर दुव्र्यवहार गरेको उप्रेतीको भनाइ छ । प्रहरी आएपछि आक्रमण गर्ने कर्मचारी भागेका थिए ।
अहिले कर्मचारीहरुले घिमिरेलाई माफी मगाउने तर सार्वजनिक मुद्दा नलगाइदिन उप्रेतीसँग आग्रह गरिरहेका छन् । सार्वजनिक मुद्दा नलगार विभागीय कारवाही मात्रै गरिदिन अनुरोध गरिरहेको तर आफूले नमानिरहेको उनले बताए । उप्रेती गत साउनमा प्रयोगशालाका निर्देशक भएका थिए ।